Soosaarida Mashiinka Calaamadaha Diyaarada Shiinaha iyo Warshad | S-conning
S213 waa daabacaad si otomaatig ah loo naqshadeeyay loona adeegsado nidaamyada calaamadeynta iyo codsadaha kala duwan ee isku qurxinta maalinlaha ah, elektaroonigga, dawooyinka, cuntooyinka & cabitaanka waxsoosaarka warshadaha kale.
Casriyaynta ugu Wanaagsan
Cunto-qubeys madax-bannaan oo xoqan ayaa u qaybiya waxyaabo fidsan oo leh cabbirro kala duwan iyo dhumuc si habsami leh oo deggan.
Qalabka xammuulka faakiyuumka wuxuu horseedaa gaadiid xasilan oo saxan oo alaabada Daabac lambar dufcaddeed, taariikh, waqti, xog go'an iyo wixii la mid ah waqtiga dhabta ah
Quudinta otomaatiga ah iyo calaamadeynta walxaha fidsan sida kartoonada isku laaban, waraaqo yar yar, caddiinka iwm. Ikhtiyaariyada isku dhafan waxaa ka mid ah daabacaadda internetka ee macluumaadka isbedelaya iyo qaanadaha / AMA code, kormeerka iyo diidmada otomaatiga ah
-Vacuum caawiyaha gudbiye si loo hubiyo xasiloonida wax soo saarka inta lagu guda jiro gaadiidka iyo calaamadeynta, oo sidaas oggolaanaya xawaaraha hawlgalka sare ee nidaamka.
-Qeebiyaha dheeriga ah iyo dariiqa agabka si loogu daboolo baaxad ballaaran oo wax soo saar ah.
Baaxadda ballaadhinta ballaadhan ee shayga cabbirka kala duwan. Habka calaamadda haynta pneumatic ee gaarka ah, wuxuu xoojiyaa saxnaanta calaamadeynta.
naqshad macquul ah oo jilicsan oo ku habboon calaamadeynta alaabooyin kala duwan.
mashiinka mishiinka wax lagu qoro ayaa ku duuli kara calaamadeynta shay kala duwan, ballaadhinta dalabka;
Horumar Horumar ah
* Waxaa lala xiriiri karaa wax kasta oo khadka tooska ah wax soo saarka si habsami leh
Laga soo bilaabo naqshadeynta, waqtiga ugu horreeya ee hawlgalka, maaraynta, dayactirka iyo khadadka wax soo saarka mustaqbalka, S-conning ayaa ka sii fikiraya adiga iyo shirkaddaada.
Buug-gacmeed lagu dhisay: dadka bilowga ah waxay wax ka baran karaan bandhigga ku saabsan sida loogu shaqeeyo mashiinnada muddo gaaban gudahood. Tani waxay badbaadinaysaa lacag iyo waqti labadaba inta lagu jiro tababarka.
Waxaa lagu dhisay buug-xallin-dhib: bandhiggu wuxuu ku hagi lahaa isticmaalaha dhib-bixinta.
Nidaamka dejinta dhererka sumadda -User-saaxiibtinimo: Kontaroolada HMI ee maalinlaha ah ayaa u oggolaanaya adeegsadaha inuu dejiyo xaddidaadaha calaamadda.
-Kontrol system-ka calaamadeeyaha wuxuu adeegsadaa shaashad shaashad taabasho oo ballaaran, oo ay caddeeyeen xeerarka CE iyo UL ee kormeerka hufan iyo wax ku oolka ah ee habka calaamadeynta.
-Nidaamkan gaarka ah ee hal abuurka leh ayaa damaanad qaadi kara in dejinta calaamadda si sax ah loo agaasimay laguna dabaqay booska saxda ah.
-Labeling counter-hayaa raadadka tirada alaabada ay farsameyso mishiinka.
-Pre-set counter - tiro ayaa loo sii deyn karaa dufcaddii wax soo saarka mashiinkuna si otomaatig ah ayuu u istaagi doonaa inta qaddarka la gaadhay.
-Si fudud u taabashada shaashadu waxay kuu oggolaaneysaa inaad dib u dhigto arjiga calaamadeynta oo aad hagaajiso booska calaamadda.
Cabbir (L) 2570 x (W) 750x (H) 1530mm
Cabbirka weelka (W) 40mm ~ 180 X (L) 60 ~ 250 X (H) 0. 3-2mm
Xawaare ≤300pc / m
Hore: S307 Mashiinka calaamadeynta weelka xawaaraha sare
Xiga: Calaamadeynta Horizontal Horizontal iyo Nidaamka xirxirida
Mashiinka Calaamadeynta Labada Dhinac
Nidaamka Syringe iyo Nidaamka Calaamadaha, Top Iyo Labeler Labeler, Daabacaha Label Dhalooyinka Qurxinta, Mashiinka Mashiinka Balaastikada, Mashiinka Calaamadaha Dhalada Ganacsi, Mashiinka Codsadaha Label ee Khaanadaha,